နူးညံ့သိမ်မွေ့သောမျှတမှု - အန္တရာယ်များ၊ ဆုများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်တို့၏ ဦး နှောက် (၂၀၁၂) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ဆိပ်ပေါ်၌ရှိသည်။
တစ်ဦးကနူးညံ့သိမ်မွေ့သော Balance: အန္တရာယ်များ, ဆုလာဘ်များ, နှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် (2012)
By သူ Carl Sherman
မြီးကောင်ပေါက်များထဲတွင်ရည်ရွယ်တဲ့ဒဏ်ရာ (အဓိကအားဖြင့်မော်တော်ယာဉ်မတော်တဆမှု) သေမင်း၏ဦးဆောင်အကြောင်းမရှိဖြစ်ပါသည်, လူသတ်မှုနောက်တစ်နေ့ဖြစ်ပါသည်1နှင့်သောက်ရေ, အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံအလွန်အကျွံနှင့်ဆင်တူ misadventures ၎င်းတို့၏ပါတီအားအတွက်မငြိမ်မသက်တစ်လမ်းကြောင်းထားခဲ့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်မဟုတ်ရင်မတ်, နားလည်တဲ့လူငယ်တွေအန္တရာယ်မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှင့်အခြားသူများ '' ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးထားကြောင်းပညာမဲ့လုပ်ရပ်များမှနာမည်ဆိုးကျရောက်နေတဲ့ရှိပါသလဲ မေးခွန်းတစ်ခု ပို. ပို. ရှုပ်ထွေးသော, မသိမသာကွဲပြားရုပ်ပုံပေါ်ထွက်လာဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်ရာမှသုတေသနတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးစေ့စပ်ခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာပြသောဇီဝဗေဒနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုနားလည်ခြင်းအပြင်သုတေသီများသည်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများ၏နောက်ကွယ်ရှိအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုခွဲခြားထားပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက်အချို့သည်အန risk တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်း၊ သူတို့၏အဖြေများကဤအရေးကြီးပြီးထိခိုက်လွယ်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ကိုကြီးလေးသောထိခိုက်မှုမှကာကွယ်ရန်မဟာဗျူဟာများကို ဦး တည်နိုင်သည်။
"တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်, သင် prefrontal cortex [တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့် Self-ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အဓိကဦးနှောက်ဧရိယာ] အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီးမခံသောကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်က high-အန္တရာယ်အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းအကြံပြုဆောင်းပါးများဖတ်ပါချင်ပါတယ်,"BJ Casey, Ph.D ဘွဲ့ကို, ဦးနှောက် Initiatives အဖွဲ့ဝင်များအတွက်ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်က Weill အတှကျဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်မှာ Developmental Psychobiology များအတွက် Sackler Institute ကများနှင့်တစ်ဦးဒါနမဟာမိတ်အဖွဲ့၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ "သို့သော် [အဲဒီဒေသမှာ] ဤကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဘူးသူကိုသားသမီးများပင်လျော့နည်းဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယခုကြှနျုပျတို့အာရုံကြော circuitry ၏စည်းကမ်းချက်များကိုပိုမိုထင်; ဘယ်လိုဒေသများအချင်းချင်းကဦးနှောက်ဆွေးနွေးချက်၏။ "
မကြာမီကသုတေသန Casey ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းမှာတခြားနေရာကဦးနှောက်ကိုဖြတ်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု၏ဆင့်ကဲကျွန်တော်တို့ကိုလူကြီးဖို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေလမ်းပေါ်တွင်ဘေးနားလည်ကူညီနိုင်သည့်အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြရန်စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ဟာကျယ်ပြန့်တိုက်နယ်အတွင်းမညီမမျှတစ်မော်ဒယ်နှင့်အတူတက် လာ. : အမျိုးမျိုးသောဒေသများ activated နေကြသည်နှင့်အသံကျယ်ကိုအနိုင်ပေးအော်ဟစ်သောတဦးတည်း,"ကာဇီကပြောပါတယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချ circuit ကိုအတွင်းထင်ရှားတဲ့, သူမ၏အမြင်၌, ဆုချခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်ရန်တုံ့ပြန်သည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတုံ့ပြန် ventral striatum / နျူကလိယ accumbens, နှင့် Impulses သတင်းပို့တားစီးနှင့်အပြုအမူထိန်းညှိကြောင်း cortical ဒေသများဖြစ်ကြသည်။
ကာဇီနှင့်အခြားသူများကိုပြသသည်အတိုင်းအကျိုးကိုစနစ်,, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အားဖြင့်၎င်း, တကယ်တော့ရင့်ကျက်ရောက်ရှိကြောင်းကာလအတွင်းအလွန်အမင်းတုံ့ပြန်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ "ဟုအဆိုပါ prefrontal cortex အတော်လေးအပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီးသည်မဟုတ်နေချိန်မှာဒါဟာတကယ်ဝေးကန်ပြီးရဲ့" ဟုသူမကပြောပါတယ်။ ပြဿနာများစိတ်ခံစားမှုတရားစွဲဆိုအခြေအနေများတွင်အဓိကအားဖြင့်ပေါ်ထွန်း။ "ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဆင်ခြင်တုံတရားဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချ၏အတော်လေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် ... သူတို့ပဲယခုအချိန်တွင်၏အပူပိုမိုအခက်အခဲရှိသည်။ " ပြင်းထန်ရေရှည်အကျိုးဆက်များ၏တစ်ဦးကတိုင်းတာလေးမွတျဦးနှောက်ကဒီ mode မှာအခါသူမကအကြံပြုမြန်ဆန်မောင်းနှင်မှု, အလွန်အကျွံသောက်, ဒါမှမဟုတ်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုများကကတိပြုခဲ့သည်ချက်ချင်းဆန္ဒပြည့်အဘို့အဘယ်သူမျှမပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။2
Beatriz Luna, Ph.D ဘွဲ့ကို, ရှိကြောင်း Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှ Neurocognitive ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏ဓာတ်ခွဲခန်း၏ Psychiatry နှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးပါမောက္ခတစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်တွင်အပြုအမူထိန်းညှိဖို့လိုအပ်တဲ့ cortical ဦးနှောက်ယန္တရားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏သင်တန်းတွင်ပိုမိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းလိုင်းပေါ်လာသဘောတူ ဒါပေမယ့် "သူကနည်းနည်းပျက်စီးလွယ်ခြင်းနှင့် untested င်နှင့်အခြားတောင်းဆိုချက်များအားဖြင့်အခွန်ကောက်ခံရနိုင်တယ်။ "
သူမရဲ့သုတေသနဘာလူကြီးများအနေဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်ခွဲခြားဘက်ပေါင်းစုံလှုပ်ရှားမှုများအကျိုးရှိစွာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစေသောဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းများအကြားအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု၏ခွန်အား, ကြောင်းအကြံပြု။ "ဒါဟာ "ဒါဟာကျွန်တော်တားစီးနှင့်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လူမှုရေးအပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့လိုအပ်တယ်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်များကိုထောကျပံ့ဖို့ခွင့်ပြုသောဦးနှောက်ကိုဖြတ်ပြီးဒေသများနှင့်အတူကွန်ရက်မှာထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ prefrontal cortex များ၏စွမ်းရည်ကိုဖွင့် Luna ကပြောပါတယ်။
ဒေသအခြားထိန်းညှိပေးသော: သူမနှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ထိရောက်သောဆက်သွယ်မှု-The တာဝန်ဖျော်ဖြေနေစဉ်အရာအတူတကွဦးနှောက်မီးဒေသများနှင့်ထိန်းချုပ်မှု၏ညှနျကွားမှဒီဂရီဆုံးဖြတ်ရန် fMRI data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ သူတို့ရဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတာတစ်တုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့စွမ်းရည်တစ်ခုလှပသောရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အလင်းတစ် flash ကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်သည်ထင်ရှားသည့်အခါ, သင်တန်းသားများကိုမဟုတ်ဘဲကြောင့်ဆီသို့ကြည့်ရှုရန် reflex သဘောထားကိုအောက်ပါထက်, ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ကြည့်ရှုရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
ကလေးများအကြားမှာရှိတဲ့မြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူလူကြီးများထက်အများကြီးပိုဆိုးဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ fMRI ဒေတာရာတိုကျရိုကျဒေသများနှင့်အောက်ပိုင်း sensorimotor ဦးနှောက်ဒေသများ task ကိုဖျော်ဖြေဖို့ synchrony အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖို့ဒီဂရီအတွက်အသက်အရွယ်နှင့်အတူတစ်သက်ဆိုင်ရာတိုးပြသခဲ့သည်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ဦးနှောက်ဒေသများအကြားစကားပြောဆိုပုံဟာတုံ့ပြန်မှုကိုတားစီးဖို့ "အထက်မှအောက်သို့" -improved နိုင်စွမ်းခဲ့တိုက်ရိုက်အပြုအမူဖို့ပိုမိုမြင့်မားဦးနှောက်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းအချက်ပြပိုမိုအစွမ်းသတ္တိကိုထင်ဟပ်။3
"တစ်ဦးအလင်းမှာလိုက်ရှာအစစ်အမှန်လောကမှာရှိတဲ့အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ဘူး" ဟု Luna ကပြောပါတယ်။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့စနစ်အရပျကို-The ပြောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ထိပ်တန်း-Down ထိန်းချုပ်မှုအတွက်မပါလျှင် "ဒါပေမယ့် '' ငါသည်ဤကျင့်ချင်ပေမယ့်ငါ it'-သင်ပိုမိုရှုပ်ထွေးအပြုအမူတွေမသန်မစွမ်းဖြစ်ကြဘယ်လိုစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်ပြုပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ "
လူကြီးများထက်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်လျော့နည်းထိရောက်သောအထက်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်ရှင်းပြချက်အနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုခန္ဓာဗေဒဖြစ်ပါတယ်။ အာရုံခံ (အဖြူရောင်အမှု၌ဆွေမျိုးတိုးခြင်းဖြင့်ထင်ဟပ်) myelination ၏ insulator တွင်လည်းအိမ်မှဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်သူတို့ပိုမြန်မက်ဆေ့ခ်ျများသယ်ဆောင်နှင့်ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်နှင့်ကောင်းစွာဦးနှောက်ထဲမှာအဖြူကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေလူကြီးအထိမြင့်တက်မြဲမြံစွာတည်သည်။4 Luna ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာသုတေသီများသည်ဤဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတာတိုကျရိုကျနှင့် subcortical ဦးနှောက်ဒေသများ-The inhibitory ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်အတူတူပင်ဆားကစ်ကိုဆက်သွယ်ထားသောဝေစာတွေကိုနေရာယူကြောင်းပြသကြ.5
"စွန့်စားမှုဆည်းပူးနေတဲ့တွေအများကြီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်, ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်အန္တရာယ်-takers နေကြတယ်" ဟု Adriana သွပ်ရည်စိမ်, Ph.D ဘွဲ့ကို, UCLA မှာ Developmental အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက် GalvanLab ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကဤသို့။ "ဒါဟာအတူတူအားလုံးဆယ်ကျော်သက်စိမ်းဖို့မအရေးကြီးပါတယ်။ "
BJ ကာဇီရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းမှာပါရဂူကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေစဉ်, သွပ်ရည်စိမ်ကလေးတစ်ဦးသုံးသပ်ကြောင်းအသင်း, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့အန္တရာယ်များအတွက် propensity ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဒေတာတွေကိုကြည့်ရှုသည့်အခါ "ဒါပေမယ့်, အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအများကြီးအုပ်စုများအတွင်းရှိခဲ့သည်။ ပိုပြီးအန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူမှာမဆို age- သတင်းပေးပို့သူတွေကိုအကျိုးကိုတုံ့ပြန်မှုအတွက် neurobiological Correlate ပြသခဲ့သည်။ "အထူးသဖြင့်, နျူကလိယ accumbens-တိုကျရိုကျ cortex လှုပ်ရှားမှု, သူတို့ကအန္တရာယ်များလိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်ဟုဆယ်ကျော်သက်များတွင်တစ်ဦးကငွေ-အနိုင်ရဂိမ်းကာလအတွင်းပိုမိုလေးလံသောအရက်သောက်, High-သက်ရောက်မှုအားကစားထ နှင့်တူသော။
သွပ်ရည်စိမ်သည်ယခုအခါတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအစစ်အမှန်လောကမှာရှိတဲ့အထဲက play ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့ရှာဖွေစူးစမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုယေဘုယျအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှောင့်အယှက်များနှင့်အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေဆီသို့စိတ်သဘောထားများကိုချဲ့ထွင်ရန်နိုငျသောအပေါများသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ "ဒါပေမယ့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုနှင့်အမြင်၌ကြီးသောတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်" ဟုသူကပြောပါတယ်။
နေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ဆင့်ခြေရာခံတဲ့ဖြစ်ပွားနေသောလေ့လာမှု, သွပ်ရည်စိမ်ပြောပါတယ်, တစ်ဦးစွန့်စားမှုယူပြီးလေ့ကျင့်ခန်းအပေါ်မြီးကောင်ပေါက် '' ရမှတ်မြင့်မားသောစိတ်ဖိစီးမှုရက်တက်သွားကြဘူးကြောင်းအတည်ပြု။7 ဒါပေမယ့်ပဏာမ fMRI တွေ့ရှိချက်ဒီနေရာမှာအကြံပြုလည်းအားလုံးမဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်ညီမျှနေသောခေါင်းစဉ်: အန္တရာယ်-ယူပြီးမှသာဤကဲ့သို့သောရက်ပေါင်းအပေါ်စိတ်လှုပ်ရှားမှု-ထိန်းညှိ limbic စနစ်အရှိဆုံး activation ကိုပြသသောသူတို့အားအတွက်ထ။
သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှု: အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေရဲ့ရှုပ်ထွေးချက်ကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာတွင်, Laurence Steinberg, Ph.D ဘွဲ့ကို, ဗိမာနျတျောတက္ကသိုလ်မှစိတ်ပညာ၏ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ, ဆယ်ကျော်သက်ဘဝ၌ကောင်းစွာအသိအမှတ်ပြုအရေးပါမှုနောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်မှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။
စမ်းသပ်ချက်တွေထဲကစီးရီးမှာတော့ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများတစ်ဦး simulated မောင်းနှင်မှုစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်အလားတူလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်နှစ်ဦးကိုမိတ်ဆွေရှိနေခြင်းအတွက်စမ်းသပ်မှုယူတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်ခဲ့စဉ်သို့သော် ပို. အလင်းအိမ်ပွေးပိုပြီး crashes- ခဲ့အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်၎င်း၏သူတို့အကျိုးဆက်များ-သိသိသာသာမြင့်တက်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါယာဉ်မောင်းလေ့ကျင့်ခန်းစဉ်အတွင်းစုဆောင်း fMRI အချက်အလက်များအရသိရသည်ခြားနားချက်, wအဖြစ်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုဆယ်ကျော်သက်အတွက်ဆုလာဘ်-, ဒါပေမယ့်မရအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်အတူဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဒေသများအတွက်နျူကလိယ accumbens-prefrontal cortex circuit ကိုရွယ်တူချင်းအများတို့ရှေ့၌ activated သိသိသာသာပိုပြီးဖြစ်လာခဲ့သည်။8
"ကျနော်တို့ကမိဘများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်မိမိတို့အကောင့်သို့သူတို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူနေတဲ့အခါမှာဆယ်ကျော်သက်တရားစီရင်ခြင်းကိုသူတို့ riskier သောအရာတို့ကိုကျင့်သော, တူညီတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုယူဖို့လိုအပ်သောဤအလုပ်၏အချို့သောအနေဖြင့်အသိအမှတ်မပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်," Steinberg ကပြောပါတယ်။
ရွယ်တူချင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်အကျိုးကိုတုံ့ပြန်မှုမြင့်အားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက် '' အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေတိုးပွါးလျှင်, တူညီတဲ့ circuit ကိုအလားအလာမှဝင်ရောက်ခဲ့သည်စေခြင်းငှါ ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်း အန္တရာယ်များသဘောထားတွေ။ Beatriz Luna ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာလေ့လာငွေကြေးမက်လုံးပေးမြီးကောင်ပေါက် (သို့သော်မရအရွယ်ရောက်သူ) အတွက်တောင်းဆိုမှုများမျက်စိ-လှုပ်ရှားမှုတားစီးတာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မသာအကျိုးကိုဆားကစ်အတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းမျက်စိလှုပ်ရှားမှုသူ့ဟာသူထိန်းညှိဦးနှောက်ဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုတိုးလာပြုလေ၏။9
"အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်တော်မူသည်ကားခဲ့လျှင်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည် '' အကျိုးကိုရှိပါတယ်ကတည်းကရဲ့အပြည့်အဝအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာသွားကြကုန်အံ့ '' Luna ကပြောပါတယ်။ "ဘာမက်လုံးပေး inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတက်ချပေးဆိုလိုတယ်ဒီနေရာမှာ ... ဒါဟာဆုလာဘ်ရဖို့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သမျှလုပ်ဖို့ဦးနှောက်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်ပါသည်ပါဘူး။"
ပိုများသောယေဘုယျအားဖြင့်, အလိုက်အထိုက်နေတတ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏လေ့လာမှုတစ်ခုထွန်းသစ်စဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ "ဤအခြေအနေတွင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်မထိခိုက်အချို့ဇီဝမောင်းနှင်ရင့်ကျက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်လျှင်အဖြစ်ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသည်ရရှိပါလျှင်၎င်းသည်ညာဘက်မဟုတ်ဘူး," Steinberg ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကအတှေ့အကွုံကိစ္စရပ်များသိသောအရာကိုကျနော်တို့လယ်အဖြစ်လေ့လာဖို့စတင်ဖွင့်ပါကဦးနှောက်ထဲကကစားဘယ်လောက်ဖြစ်၏။ "
သူကသက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများ၏ဘေးသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးတိုးတက်စေရန်ပြသနည်းလမ်းလေ့ကျင့်ရေးဦးချင်းစီအားဖြင့်လျော့နည်းသွားစေခြင်းငှါရှိမရှိစူးစမ်းနေပါတယ်။ "ကျနော်တို့ရှိသည်နှင့်သင်တန်းခဲ့ရှိသည်မဟုတ်သူတို့တွင်ရွယ်တူချင်းအများတို့ရှေ့၌ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများကိုကြည့်တာပေါ့" ဟုသူကပြောပါတယ်။
ဒါနမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်အဘိဂဲလ Baird, Ph.D ဘွဲ့ကို, Vassar ကောလိပ်မှာစိတ်ပညာပါမောက္ခမှတစ်ဦးသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်-ယဉ်ကျေးမှု-in ကိုဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူအတွေ့အကြုံ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလျှော့တွက်မဖြစ်သင့်။ သူမသည်အဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဖော်ပြထားခဲ့ပါသည် "အပျိုဖော်ဝင်အဖြစ်လူသိများဇီဝအဖြစ်အပျက်၏လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားရပ်။ "10
"ရိုးရိုးဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လူ့အပြုအမူအတွက်အဘယ်အရာမျှမရှိ" ဟု Baird ကပြောပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်သူမကအကြံပြု, နှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးကိုကြေးဇူးတငျကွောငျးတောင်းဆိုနေပြီ။
အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေတွေကောင်းတစ်ဦးသို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့တောင်းတဲ့အခါမှာတဦးတည်းစမ်းသပ်မှုမှာတော့သူမကအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအမြော်အမြင်ရှိရှိယင်းလူကြီးများသိသိသာသာပိုမြန်ပြု -although "ဟုအလင်းမီးသီးကိုက်" သို့မဟုတ် "" အမိုးကိုချွတ်ခုန် "ငါးမန်းနှင့်အတူရေကူး" အဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုအယူအဆတွေကိုပယ်ချလိုက်သည်။ အဆိုပါခြားနားချက်ပုံပါဝင်ပတ်သက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ခဲ့: အဆိုပါ prefrontal cortex ဆယ်ကျော်သက်အတွက်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့စဉ်လူကြီးများသည်အမြင်အာရုံ cortex နှင့် insula (visceral အာရုံသို့အတှေးဘာသာတစ်ခုကဦးနှောက်ဧရိယာ) တွင် သာ. ကြီးမြတ် activation ပြသခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများထဲမှာ, အရွယ်ရောက်အလားအလာမြင်ယောင်နိုင်ခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကကျော်တွေးတောဆင်ခွင်တာတွေရတယ်စဉ်ချက်ချင်းတုံ့ပွနျ Baird အကြံပြုထားသည်။11
ရင့်ကျက်မှုနှင့်အတူ "အဘယ်သို့ငါဖြစ်ပျက်ထင်ဆယ်ကျော်သက်ရုံစိုက်ပျိုး-ups သူတို့စဉ်းစားရန်မလိုပါကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချထဲမှာအသုံးပွုနိုငျကွောငျးကို။ , အမှားအမှန်၏သူတို့အားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုကြောင့်အူစနစ်ကဖွံ့ဖြိုးဖို့လုံလောက်တဲ့အတှေ့အကွုံခဲ့ကြပြီမဟုတ်ကြောင်း" သိမှတ်ခံစားမှု, သူကထပ်ပြောသည်, တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်အခြားသူများ၏ကြောင်းကနေယဘေုယနိုင်စွမ်းလာပါတယ်။ တစ်ဖန်အပေါ်သူမ၏လက်ကိုခုတ်ဖြတ်ခဲ့သူတစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီးသူကောင်းစွာမြင်ယောင်နှင့်ရုပ်ပိုင်းအတစ်ဆယ်ကျော်သက်မဟုတ်နိုင်မယ့်လမ်းအတွက် "တစ်ဦးအလင်းမီးသီးကိုက်" ၏စိတ်ကူးတုံ့ပြန်နိုင်လိမ့်မယ်။
သူမ၏တွေ့ရှိချက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအတွက်ဆုလာဘ်ဆီသို့အစွမ်းထက် drives တွေကို၏အခန်းကဏ္ဍကိုအလေးပေးကြောင်းသုတေသနဆန့်ကျင်ပါဘူး, သူမကပြောပါတယ်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၏နှေးကွေးသောခြေလှမ်းတစ်ခုချက်ချင်းအူတုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်, စိတ်ခံစားမှုဆန္ဒပြည့်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ထဲမှာအားနည်းချက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဆက်နိုင်ဘူး။
မဟုတ်သလိုသူမ၏တွေ့ရှိချက်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ချို့တဲ့ရသောအမှုသည်အရာတစ်ခုခုကိုဆိုလိုဘူး. ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဇာတ်စင်၏ဗဟိုလုပ်ငန်းတာဝန် "အနေနဲ့အတွေ့အကြုံဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကျန်းမာဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုအထူးယဉ်ကျေးမှုအတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်တာ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသင်ယူနှင့်နေသည် Baird ကပြောပါတယ်။ တချို့ကအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေသည့်ဆယ်ကျော်သက်ပိုင်နက်နှင့်တကွကြွလာ။ "ဒီလှည့်ကွက်ကသူတို့ကိုသတင်းအချက်အလက်, သေစေလောက်မဟုတ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူမိမိတို့၏ system ကိုတက်လေ့ကျင့်ကိုကူညီသည် ... ငါ၏အကြီးမြတ်ဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများတစ်ခုမှာအများအပြားဆယ်ကျော်သက်ကြောင်းအတွေ့အကြုံကို-ကြောင့်လူတွေများလွန်းသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုတော့ကြသည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်မကားကို crash ထက်ဆိသူမ၏စက်ဘီးကိုချွတ်လဲကျမဟုတ်ဘဲအများကြီးချင်ပါတယ်။ "
၎င်း၏လက်ထောက်ထောငျခြောနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, သူမထောက်ပြ, တခြားနေရာထက် US မှာဝေးတော့ဘူးကြာ; ကလေးတွေသူတို့ 14 သို့မဟုတ် 15 နေသည့်အချိန်အားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတာဝန်များကိုယူဆရှိရာအချို့သောယဉ်ကျေးမှုရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်အန္တရာယ်-ယူပြီးအခြေအနေများတွင်, တူညီတဲ့အသက်အရွယ်၏ '' အမေရိကန်တွေထက်ပိုပြီး "အရွယ်ရောက်ပြီးသူ" အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်သလား? "ငါသည်ကြောင်းဒေတာအဘို့အကြှနျုပျ၏လက်ဝဲလက်မောင်းပေးပါလိမ့်မယ်," Baird ကပြောပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ 2012 Published
­­­­1 ကနျြးမာရေးနှင့်လူ့န်ဆောင်မှုများ၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာန, ကနျြးမာရေးအရင်းအမြစ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအုပ်ချုပ်ရေး, မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဗျူရို။ ကလေးကျန်းမာရေးအမေရိကန်နိုင်ငံ 2011 ။ Rockville, Maryland က: ကနျြးမာရေးနှင့်လူ့န်ဆောင်မှုများ, 2011 အမေရိကန်ဦးစီးဌာန: http://mchb.hrsa.gov/chusa11/hstat/hsa/pages/229am.html
2ကာဇီ, BJ et al ။ Braking နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်၏အရှိန်မြှင်။ J ကို Res မြီးကောင်ပေါက်။ 2011 မတ်လ 1; 21 (1): 21-33 ။
3Hwang K, Velanova K, & Luna, B. တားစီးထိန်းချုပ်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အခြေခံအထက်မှအောက်သို့တို့ရှေ့ပိုင်းသိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်များအားကောင်းစေခြင်း - ထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုလေ့လာမှုကိုအလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ ဂျေအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 17 နိုဝင်ဘာလ 2010; 30 (46): 15535-15545 ။
4 Giedd, ဖြစ်မှု။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်: သင်ယူဖို့ရစေတယ်, အန္တရာယ်များကိုယူရစေတယ်။ Cerebrum 26 ဖေဖော်ဝါရီလ 2009: http://www.dana.org/news/cerebrum/detail.aspx?id=19620
5 Asato MR et al ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များတွင်အဖြူအရေးပါဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ: တစ်ဦးက DTI လေ့လာပါ။ ဦးနှောက် Cortex ၂၀၁၀ စက်တင်ဘာ၊ 2010: 20-2122
6 သွပ်ရည်စိမ်, တစ်ဦးက et al ။ စွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်: အန္တရာယ်မှာဘယျသူနညျး ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံ 10:2(2007), စစ F8-F14
7Galván A & McGlennen KM ။ နေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်အန္တရာယ်ရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုတိုးစေသည် - ပဏာမလေ့လာမှု။ dev Psychobiol။ 2012 မေလ; 54 (4): 433-40 ။
8ချိန်, ဂျေ et al ။ ရွယ်တူဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry အတွက်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေတိုးမြှင့်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံ 14 (2011): F1-F10 ။
9Geier CF. et al ။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်နု။ Cereb Cortex။ 2010 ဇူလိုင်; 20 (7): 1613-29 ။
10Baird, AA ကို, Silver, SH (2011) ကဆယ်ကျော်သက်မျိုးစိတ်သစ်: အဘယ်ကြောင့်ကျားမကိစ္စရပ်များ။ (စာနယ်ဇင်းအတွက်) မာပညတ္တိကျမ်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းခဲဆောင်းပါးများ Edition ကို, 62 (3): http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDgQFjAE&url=http%3A%2F%2Ffaculty.vassar.edu%2Fabbaird%2Fabout%2Fpublications%2Fpdfs%2FBaird_Mercer_easyread.doc&ei=tF9PUKCRK-P00gG644C4Cg&usg=AFQjCNGQQ0iZwmioUfI3C6tC-TovQvGAhQ
11Baird AA ကို, et al, "သင်သည်အဘယ်သို့စဉ်းစားခဲ့ကြသလဲ" မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်တစ်ဦးကအာရုံကြောလက်မှတ်။ ပိုစတာတင်ဆက်မှု: 12th နှစ်ပတ်လည်သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ Society ကအစည်းအဝေး 2005: http://faculty.vassar.edu/abbaird//research/presentations/pdfs/CNS_05_ab.pdf